Arc 'Teryx （Canada): Chinzvimbo chepamusoro chekunze cheCanada, chakavambwa muVANCOUVER, Canada muna 1989, dzimbahwe rayo, dhizaini dhizaini, uye main line yekugadzira ichiri muVancouver. Nekuda kwekutsvaga kwayo kupenga kwehunyanzvi nyowani uye matekinoroji matsva, mumakore anopfuura gumi chete, yakura ikava yekuziva ...
Muhafu yekutanga ye2020, kubuda kwechimbichimbi kweECVID-19 kunoisa iyo yepasi rose yekutengesa indasitiri, kusanganisira yeindasitiri yezvipfeko, kune simba guru uye kuyedza. Pasi pehutungamiriri hwakasimba hweCPC Central Committee, mamiriro ekudzivirira chirwere uye kutonga muChina akaenderera mberi nekuvandudza, iyo ...
Kubuda munguva yechando, nharaunda dzakasiyana, nguva dzakasiyana, nzira dzakasiyana, mazera akasiyana, sarudzo dzekunze dzekupfeka dzakasiyana. Saka unosarudza sei? 1. Tenzi misimboti mitatu Kubva mukati nekunze, ndeiyi: sweat layer-heat layer-windproof layer. Kazhinji kutaura, iyo ...
Ndeimwe yemakambani ekutengesa muChina, iri kuita mbatya kweanopfuura makore gumi Zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira Jacket, Parka, Waistcoats, bhurukwa, zvikabudura, Kwose, ese marudzi eIniwear, senge Raincoat, Rain poncho. Zvakare pamwe neKnee mapedhi, Wrist mapedhi, anokurumidza-kuomesa matauro, Anotakurika mapurasitiki ...